News Headline | Artist Khabar | Page 5
News Headline	नेता लोहनीको ‘राष्ट्रवादी चिन्तनका आयामहरू’ सार्वजनिक	फागुन, काठमाडौं । राप्रपा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी लिखित ‘राष्ट्रवादी चिन्तनका आयामहरू’ सार्वजनिक गरीएको छ । बिहिबार राजधानीमा आयोजीत पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली लगायतका नेताहरुको उपस्थिती थियो..	रेखा थापा राप्रपामा केन्द्रिय सदस्यको दावेदार	फागुन, काठमाडौं । नायिका रेखा थापा यतिखेर राप्रपा पार्टिमा तल्लीन भएर लागीरहेकी छिन् । केहिसमय अघिमात्र पार्टि अध्यक्ष कमल थापाबाट टिकालगाएर पार्टि प्रवेश गरेकी रेखा पार्टिमा गए लगतै कतिले प्रशंमा पनि दिएका छन् त कहिले आलोचना पनि गरेका छन् ।
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा फागुन ६ गतेदेखी हुने पार्टी एकता महाधिवेशनको तयारी तिब्र भइरहेको छ ।..	राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड हुने	फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह–एनएफपीजेले आफ्नो स्थापनाको २० औं वर्षगाँठ पारेर ‘फोटो कन्सर्न राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड– २०७३’ गर्ने भएको छ ।
बैशाख १३ गते पर्ने राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसको अवसर पारेर अवार्ड बाडिन लागिएको हो । कार्यक्रममा फोटो पत्रकारलाई फरकफरक विधामा पुरस्कृत गरिनेछ ।
कार्यक्रममा ‘डिवि..	लाईभ कन्सर्टका लागी बलिउडका चर्चित गायक कुमारसानु नेपाल आउने	फागुन, काठमाडौं । लाईभ कन्सर्टका लागी बलिउडका चर्चित गायक कुमारसानु नेपाल आउने भएका छन् । २६ मेमा होटल याक एण्ड यतिमा आयोजना हुने ‘कुमारसानु लाइभ इन कन्सर्ट’का लागि उनी नेपाल आउने भएका हुन् । कुमारसानुले करिब २ घन्टा कार्यक्रममा आफ्नो गायक प्रस्तुती दिने बताइएको यस कार्यक्रमलाई मन्टेज इन्टरनेशनलले आयोजना गर्ने भएको हो ।
‘दिल हे कि..	कोमल वलीले दिइन् रेडियो नेपालबाट राजिनामा	फागुन, काठमाडौं । सञ्चारकर्मी तथा चर्चित लोकगायीका कोमल वलीको अब देखी रेडियो नेपालमा समाचार सुन्न नपाइने भएको छ । वलीले रेडियो नेपालबाट राजिनामा दिएकी हुन् ।
रेडियो नेपालबाट केहि समय अघि कोमलले राप्रपा नेपाल पार्टिमा लागेर राजनिति गर्ने बताएकी थिइन् ।उनी राजनीतिमा लागेसँगै रेडियो नेपालले वलीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरण..	सन्नी लियोन आफ्नो यस्तो खास अंगको पनि बिमा गर्न चाहान्छिन्	फागुन, काठमाडौं । बलिउडकी अभिनेत्री सन्नी लियोन यतिखेर अलिक फरक कुराबाट चर्चामा छिन् । उनले आफ्नो एक अंगको मात्र बिमा गराउने कुरा गरेकी छिन् । प्रायः व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनको, स्वास्थ्यको, अनि सम्पत्तिको बीमा गराउँछन् । तर केही अचम्मका बीमा पनि हुन्छन् । आवाजको बीमा, मुस्कानको बीमा अनि शरीरको अंगको पनि बीमा हुन्छ ।
सन्नीले आफ्नो बिशेष..	नकारात्मक समाचारमात्र किन भाईरल हुन्छन् ?: प्रकाश योगी	फागुन, काठमाडौं । गएको चाइनिज नया बर्ष को अवसरमा मलेसियामा धेरै कार्यक्रमहरु आयोजना भए । नेपालबाट थुप्रै नेपाली आर्टिस्टहरु मलेसिया पुगेर मलेसियामा रहेका नेपालीहरुलाई मनोरञ्जना दिए । यसैबिच मलेसियाको बिभिन्न शहरमा युनिक सास्कृतिक धमाका ४ पनि जनवरी २८ तारिकबाट शुरु भएर चार दिनसम्म चलेको थियो ।
कार्यक्रम सकिए लगत्तै केहि कुराको चर्चा..	शाहरुख खानलाई फेरी अर्को तनाब	फागुन, काठमाडौं । बलिउड स्टार शाहरुख खान बेलाबखतमा चर्चामा आईरहन्छन् । चलचित्रको क्षेत्रबाट उनको चर्चा चलेकै हुन्छ तर अन्य कारणले पनि उनको चर्चा चलिरहेको हुन्छ । अहिले भने उनी केहि समस्यामा छन् ।
केहि समय अघि उनको चलचित्र रईसको प्रमोशनको दौडधुपका क्रममा रेलवे स्टेशनमा भएको हंगामा तथा एक युवकको मृत्युको विषयमा चर्को विरोध भएको छ । चर्को..	प्रेमकथामा बनेको ‘सुस्केरा’को टिजर यस्तो (भिडियो)	फागुन, काठमाडौं । चलचित्र 'सुस्केरा'को टिजर सार्वजनिक गरीएको छ । चलचित्रमा सुरक्षा पन्त र स्वरुप पुरुष ढकाल मुख्य भुमिकामा छन् । साम्तेन भुटियाको निर्देशन रहेको फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन मिति तय भईसकेको छैन् । दुईमिनेट लामो टिजर हेर्दा चलचित्रले सांगितिक प्रेमकथा बोलेको पाइन्छ ।
मौरी ईन्टरटेन्मेन्टको व्यानरमा बनेको फिल्ममा लगानी..	‘रोमियो’ मा निशा ‘बाबरी’ (भिडियो)	फागुन, काठमाडौं । चलचित्र ‘रोमियो’को गीत सार्वजनिक गरीएको छ । नायिका नीशा अधिकारी र नायक हसनराजा खान मुख्य भुमिकामा रहेको यस चलचित्रको ‘बाबरी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरीएको हो ।
प्रेम दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको चलचित्रको रोमान्टिक गीतमा सन्तोष लामा र मेलिना राइको स्वर, मुकेश राइको शब्द, ताराप्रकाश लिम्बुको संगीत रहेको छ । एचआरके..	Pages:«12345678...129»